53500 ~ 53500 Kyats
--	Capable of deodorizing, color removal, bactericide and filtration of harmful impurities in water -	Ceramic Senior Completely remove impurities such as soil, sand, mud, rust and other impurities … harmful to your body -	The cartrigde filter mixed6floors -	Tap magnet to create water source full of energy, help protect the body against variety of diseases have healthy -	Mineral Stone contain many beneficial minerals for health, absorption of toxins.
Reverse Osmosis Drinking Water Systems (ရေသန့်စက်)
325000 ~ 325000 Kyats
PurePro EC105P You get quality &amp; performance at prices that will surprise you! Since we introduce This economic unit to the market, the response has been incredible success. Why pay more? Buy from the source and save money! Our EC105P comes complete withaNSF certified 3.2 gallons water storage tank, USA made membrane and all the necessary fittings, installation kits, extra color 1/4&quot; tubing, andalong-reach chrome faucet. Private labeling are welcome
RAF -exe 4T မော်တော်ဆိုင်ကယ်အင်ဂျင်ဝိုင် SAE 20W50, APT (SLICF) ဖြစ်ပါတယ်။ RAF 4T ကို မော်တော်ဆိုင်ကယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဓါတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်သုံးအင်ဂျင်အမျိုးမျိုး မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ RAF Oil ကို UAE နိုင်ငံရှိ (RAF Industries- Group of Company) မှ အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ RAF တံဆိပ်အင်ဂျင်ဝိုင်များကို နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု Certificate များဖြစ်သည့် ISO 9001-14001-18001-2014 အပြင် WQA, Emirate Quality Mark, API လိုင်စင်နံပါတ် 3085 ဖြင့် အထူးအရည်အသွေးမြင့် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့် အရည်အသွေးမှန်ကန်စိတ်ချရပါသည်။ RAF Oil စက်ဆီချောဆီကို 100% Pure Virgin Oil မှ Adidtive ဖြင့် Blending ပြုလုပ်သားပြီး ALM Co.,Ltd မှ တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်တင်သွင်းရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ RAF အင်ဂျင်ဝိုင်မှ အိမ်သုံးကားများအတွက် 5W30, 5W40, 10W30, 10W40 အစရှိသော Motor Oil များကို ထုတ်လုပ်ဖြန့် ချီရောင်းချပေးနေပါသည်။ ရုံးသုံး၊ လုပ်ငန်းသုံး - ကားကြီးကားလေးများအတွက် 15W40, 20W50 Diesel Engine Oil များကိုလည်း 5L, 25L, 200L များကို ဖြန့် ချီရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။
Purepro Reverse Osmosis System with mineral &amp;alkaline filter7stages
375000 ~ 375000 Kyats
အမေရိကန်နိုင်ငံ Purepro မှ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီနိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရ Purepro အမှတ်တံဆိပ်ဆစ်နေ့ဂါလံ ၅၀ ထွက် Reverse Osmosis (RO) / Reverse Osmosis With Alkaline Miaeral Filter သောက်ရေသန့်စက်ကို တပ်ဆင်လိုက်ရုံဖြင့်ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာပြီး လူကြီးမင်းတို့၏ မျက်စိရှေ့မှာပင်အရည်အသွေးမြင့် Ro/Alkaline ရေသန့်ကို ထုပ်ယူသောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
undersink purifier RO system
Swank 250 LPH RO Plant
Reverse Osmosis Systems (RO): RO water treatment technology is the most advanced energy-saving and effective membrane separation technology. Water pressure is used to force water molecules go throughavery fine membrane, leaving the contaminants behind.Reverse Osmosis System can remove salt and most of the organisms and microorganisms which exist in the water (removal can reach 97%-98%). Therefore, RO systems are widely used in the fields of sea water desalination, drinking pure water, wastewater treatment and so on.